Fiombonam-bavaka Alahady faha-XI man.Trinite
Herinandro 08-13 Aogositra 2016
“Andriamanitra manamarina nymeloka ”
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manamarina ny meloka, dia isika mpanota izay meloka noho ny fahadisoantsika, ary mendrika ny hohelohinanoho ny fahotantsika. Mahagaga indrindra kosa anefa ny famindrampon’Andriamanitra, fa ”fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8, dia Izy nividy antsika tamin’nyrany masina sarobidy indrindra (1 Pet.1:19). Rehefa izany, dia ambaran’nySoratra Masina hoe: ”Fa tsy misy fanamelohana hoan’izay ao amin’i Kristy Jesosy” Rom.8:1. Fa ”Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao” Jao.3:17.
Alatsinainy 08: Ny fahasoavan’Andriamanitra no manamarina ny olony.
“Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no nahatoy izao ahy”1 Kor.15:10.
Vakiteny 1: Sal.23:1-6.Vakiteny 2: 1 Kor.15:1-10.Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.15:10.
Fitarihan-kevitra:”Ny fahasoavan’Andriamanitra” dia nyfamindrampony izay mamela nyheloky ny mpanota. Izany no nahatonga nympanao Salamo hihira hoe:”Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helokao rehetra” Sal.103:2-3. Fa raha voalazan’nySoratra Masina fa ”Tsy misy fiadanana ho an’nyratsy fanahy” Isa.48:22, dia ambarany mazava koa fa ”Sambatranyolonaizayvoavelanyhelonysyvoasaronanyfahotany. Sambatranyolonaizaytsyisain’iJehovahheloka, arytsymisyfitakanyfanahiny Sal.32:1-2.
Talata 09: Andriamanitra manamarina izay manao ny sitrapony.
“Nanisy soa ahy araka ny fahamarinako Jehovah” 2 Sam.22:21.
Vakiteny 1: Apok.22:10-13.Vakiteny 2: 2 Sam.22:21-29.Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: 2 Sam.22:21.
Fitarihan-kevitra:Ankasitrahan’Andriamanitra tokoa izay manao ny sitrapony sy mandeha araka ny lalany ary manoa ny didiny. Mariky ny fitiavana an’Andriamanitra izany, ka ataony ho toy ny tsy manan-tsiny eo imasony ny olona izay manao toy izany. Fa ”ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna”Rom.13:10, ary hahazoana sitraka eo imason’Andriamanitra. Izany dia tsy fomba ivelany fa fandresen-dahatry ny fo. Hoy Paoly:”Ny fitiavan’i Kristy no manery anay”2 Kor.5:14a.
Alarobia 10: Andriamanitra manamarina ny mpanota mibebaka.
“Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota” Lio.18:13.
Vakiteny 1: Isa.55:6-7.Vakiteny 2: Lio.18:9-14.Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Lio.18:13.
Fitarihan-kevitra:Andriamanitra dia mahari-po sady be famindram-po ka tsymamaly araka nyratsy natao, fa tia sy vonona ny hamela heloka ny mpanota izay mahatsiaro ny fahadisoany ka mibebaka ny amin’izany. Tenyazo atoka no nataon’i Jaona ilay ”apostolin’ny fitiavan’Andriamanitra” noho izy nahalala akaiky ny fon’Andriamanitra : ”Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsi-fahamarinana rehetra”1 Jao.1 :9.Raisosyivelomynyfamelan-kelokaavyamin’Andriamanitra, ary« azamanotaintsony » Jao.8 :11.
Alakamisy 11: Andriamanitra miantso ny mpanota mba hohamarininy.
“Tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota” Mat.9:13.
Vakiteny 1: 2 Pet.3:8-10.Vakiteny 2: Mat.9:9-13.Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Mat.9:13.
Fitarihan-kevitra:Mitady sy miantso ny mpanota tokoa Jesosy satria sarobidy amin’Andriamanitra ny fanahy iray ka tsy tiany ny hahavery azy. Fa hoy Jesosy raha nanao fanoharana: ”Iza moa no olona aminareo, izay manana ondry zato, ka very ny anankiray, no tsy mandao ny sivy amby sivi-folo any an-efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? ary rehefa hitany iny, dia ataony eo an-tsorony, ka dia faly izy” Lio.15:4-5. Metezahohitan’AndriamanitrahampifalyAzy.
Zoma 12: Matokia ny fanamarinan’Andriamanitra.
“Matokia, anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2b.
Vakiteny 1: Asa.3:17-21.Vakiteny 2: Mat.9:1-8.Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Mat.9:1-2.
Fitarihan-kevitra:Mampangaihay tokoa ny manan-keloka ka tsy voavela, fa maningotra ny fo no sady mitera-pahavoazana ho an’ny fahasalamana sy fiaimpiainan’ny olona mihitsy aza. Kanefa be indrindra ny famindram-pon’Andriamanitra izay nasehony tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany. Fa voasoratra hoe: ”fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesosy” Rom.3:23-24. Mahasambatra ny hohamarinin’Andriamanitra, fa ”Izy no fahamarinantsika” Jer.51:10.
Asabotsy 13: Jesosy mifona ho an’ny mpanota.
“Raha misy manota, dia manana Solovava ao amin’ny Ray isika, dia Jesosy Kristy, Ilay Marina” 1 Jao.2:1b.
Vakiteny 1: Rom.8:33-37.Vakiteny 2: 1 Jao.2:1- 6.Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: 1 Jao.2:1-2.
Fitarihan-kevitra: Satria tsy haintsika nymifona marina amin’Andriamanitra, dia mifona ho antsika Jesosy Ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra nitondra ny fahotan’izao tontolo izao (Jao.1:30), ary nohenoin’ny Ray ny fitarainany ho ansika satria Marina sy Masina Izy. Fa ”ny Fanahy no mamonjy ny fahalementsika: fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny Fanahy no mifona amin’ny fitarainana tsy azo tononina” Rom.8:26. Ary dia mampahery antsika ny tenin’Andriamanitra manao hoe: “”Koa satria Isika manana Mpisoronabe lehibe, Izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy, Zanak’Andriamanitra, aoka isika hihazona ilay efa nekentsika” Heb.4:14.